यस्तो छ जाँड रक्सीले बिगारेको आजको कलियुगको समाज, जानी राखौ
अक्टोबर 3, 2019 अक्टोबर 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments जाँड रक्सी, समाज
यस्तो छ जाँड रक्सीले बिगारेको आजको कलियुगको समाज, जानी राखौ । नेपालमा सभा होस् या पार्टी होस् या कुनैपनि काममा किन नहोस् आजकाल रक्सी वियर नभएको पार्टी हुदैन । यदि यसो गरिएन भने शायद कोही नआउन पनि सक्छ । मैले सुनेको थिए रक्सी वियर नभएको ठाउँमा को जाने मत जान्न भनेको थुप्रैको मुखबाट सुनेको थिए ।
जाँड रक्सीबाट सरकारलाई बढी टेक्स उठेको छ भने कार्यकर्ता पनि यसै लतको पछि नाची रहेको वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ । यदि चुनावमा रक्सी र वियर नभई दिएको भए भोट हाल्ने मानिस पाउन समेत गार्हो हुने थियो होला । देशको अवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने सवैभन्दा नेपाली जनतालाई विगार्ने यहि तत्व बढी देखिएको छ ।
अभिभावकको गल्तीले गर्दा सन्तानले समेत पिडा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । रक्सी जस्ता पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यक्तिले नै यस्ता पदार्थ खाएर गलत काम गर्नुलाई हजुर के भन्नु हुन्छ ? सहि व्यक्तिले खान्छ भने पनि उ भ्रष्ट हुन सक्छ । जसले गलत क्रियाकलाप गर्न उक्साएको हुन्छ । मानिस सहि भएर के गर्न ? यो पाठ हरेकले बुझ्न आवश्यक छ ।
मलाई एउटा कथा लेख्न मन लाग्यो । अकबर बिरबल बाहिर घुम्न निस्केका बेला एकजना जड्याले बाटो छेकेर हात्तीको मोल कति भनेर सोधेछ । यो सुनेपछि भोली दरबारमा हाजिर गराउनु भन्ने हुकुम भएछ । भोली पल्ट दरबारमा हाजिर गराउदा अकबरले भनेछन् मानुभाव पैसा कति लिएर आएका छौ भनेर सोधेको उत्तरमा हात्ती किन्ने हिजो नै गई सके म मात्र आएको छु भनेछ । यहाँ हिजो उसले रक्सी खाएको थियो गलत गर्यौ आज उसले खाएको थिएन सहि जवाफ दिन सकेन ।
नोट : आज जतिपनि गलत काम भए सवै जाँड रक्सी जस्ता पेय पदार्थको कारणले गर्दा भए यस्ता पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । मापसे चेक गरेर मात्र उसलाई कुनै पनि काम गर्न अनुमति दिनुपर्छ । रक्सी पिएर आउने जोसुकै किन नहोस् उसलाई शशक्त कार्बाही गरेको हुनुपर्छ ।
← यी हुन् 4G चल्ने स्मार्टफोनहरु
सेक्सको अतृप्तिले ल्याउन सक्छ समाजमा बिकृति, सेक्स पावर बढाउन के गर्ने ? →
समाज परिवर्तन गर्ने पेशा पत्रकारिता
मार्च 8, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
डिसेम्बर 4, 2018 डिसेम्बर 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3
अक्टोबर 4, 2019 अक्टोबर 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0